ललीतपुरका मेयरले आचि गरेर ट्वाइलेटको उद्घाटन गरेपछि! (भिडियो हेर्नुहोस्) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारललीतपुरका मेयरले आचि गरेर ट्वाइलेटको उद्घाटन गरेपछि! (भिडियो हेर्नुहोस्)
November 26, 2020 admin समाचार 1687
जनप्रतिनिधिहरुसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन्, जनताको अपेक्षा पूूरा गर्न नसक्दा उनीहरु आलोचित समेत हुने गरेका छन् । हुन त जनप्रतिनिधिहरुका पछिल्ला गतिविधिहरु पनि उदेक लाग्दा नै छन् ।
केही समय अघि पोखराका मेयर मनबहादुर जिसीले डोजर चलाएर उद्घाटन गर्दा दुर्घटना भएको खबर आएको थियो । हालै वाग्मती प्रदेशका मन्त्री सालिकराम जमरकट्टेल सहितको टोलीले नुवाकोट पुगेर ट्वाइलेट उद्घाटन गरेको समाचार आएको थियो ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो क्लिप भाइरल भएको छ । ललीतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन उक्त क्लिपमा एक शौचालय उद्घाटन गरिरहेको देखिन्छन् । उक्त भिडियो सेयर गर्नेले ‘मेयरसावले आची गरेर ट्वाइलेटको उद्घाटन गरे’ भनेर लेखेका छन् ।
भिडियोमा ट्वाइलेटको रिवन काटेर उद्घाटन गरेपछि मेयर टुसुक्क बसेको देख्न भने सकिन्छ । तर उनले शौचालय प्रयोग गरे नगरेको भने थाहा हुन सकेन ।
November 9, 2020 admin समाचार 3025
December 21, 2020 admin समाचार 1587
December 27, 2020 admin समाचार 1530